झलकमानको गीतले नेपाल तानिएका घुमन्ते गायक उनी आफूलाई संगीतको अध्येता मान्दैनन्, तर लोकगीतबारे अनुसन्धान गरिरहन्छन्। नयाँ ठाउँ पुगेर त्यहाँको लोकगीत संकलन गर्नु, गाउनु उनको काम बनेको छ। विभिन्न देशका लोकगीतहरुलाई उनले पुनःजन्म दिएका छन्। उनी लोकगीतलाई ‘माटोको धुन’ मान्छन्। बुधबार, कात्तिक ३, २०७८
नयाँ पुस्ताको दशैं अर्थात् घुमघामको पर्व परम्परागत रुपमा दशैंलाई हर्ष उल्लासका साथ परिवार भेट हुने र रमाइलो गर्ने चाडको रुपमा मनाइँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय दशैं केही फे... बुधबार, असोज २७, २०७८
किन दशैँकै बेला पुस्तक प्रकाशनको ‘बाढी’ चल्छ? सामान्यतयाः वर्षैभरि साहित्यिक र गैरसाहित्यिक पुस्तकहरु प्रकाशन भइरहेका हुन्छन्। तर, लेखक र प्रकाशकहरुका लागि दशैँछेकको समय ‘पुस्तक... आइतबार, असोज २४, २०७८
दशैं, खुसी र खसी [तस्बिरहरु] दसैं भित्रिएसँगै खसी, बोका जोहो गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यतिबेला राजधानीको खसीबजारमा खसी किन्नेको भीड देख्न सकिन्छ। शनिबार, असोज २३, २०७८
संयोगले बनेका डाक्टर, जो गाउँमै रमाउँछन् जब संयोगले इटालियन महिलासँग भेट भयो, विनोद दंगालको जीवनले नयाँ मोड लियो। शुक्रबार, असोज २२, २०७८
बलिउड र लागु औषधको सम्बन्ध किन बाहिर आउँदैन? बलिउडमा एकपटक फेरि ड्रग्स (लागु औषध)को चर्चा चुलिएको छ। विगतमा जस्तो यसपटक यो मुद्दामा प्रत्यक्ष रुपमा बलिउडका कुनै स्टार सामेल छैनन... बिहीबार, असोज २१, २०७८
सुपथ मूल्य पसल पुग्नेहरु भन्छन्– चाडपर्वमा सरकारले राहत दिएको महसुस भयो कुपन्डोलका राजेन्द्र श्रेष्ठ बुधबार सुपथ मुल्य पसल थापाथलीमा भेटिए। उनी दैनिक आवश्यकताका खाद्य वस्तु लिन आएका थिए। थापाथली आउने काम... शुक्रबार, असोज १५, २०७८
सरकारी कार्यालयबाट निकालिएका हरिशंकर कसरी बने ‘उत्कृष्ट कर्मचारी’? नागरिकता बनाउन जाँदा कुनै दिन सरकारी कार्यालयबाट निकालिएको तितो अनुभव छ, हरिशंकर ज्ञवालीसँग। उनी गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासस्थित जिल्ल... मंगलबार, असोज १२, २०७८
श्रीमती जेलबाट छुटिन्, तर उनी जिन्दगीभर दुखिरहने छन् श्रीमती जेलबाट छुटेको थाहा पाएको दिन उनी दुखी भए। मन अमिलो भयो। एक पटक फेरि ती सारा घटना रिलझैं दिमागमा घुमे। शुक्रबार, असोज १, २०७८
जसले अभिनय त्याग्न नसकेर अमेरिका छोडे १७ वर्ष अमेरिका बसेर फर्किएका सरोज खनाल अझै पनि ठूलो वा सानो पर्दाका लागि खोजी हुने कलाकार हुन्। उनी नेपाल फर्किएको पाँच वर्ष भइसकेक... बुधबार, भदौ ३०, २०७८
लोकप्रिय बन्दै 'रिमेक' : पुराना गीत, नयाँ स्वाद ‘फूलबुट्टे सारी’ बोलको गीत करिब ११ वर्षअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। राजनराज सिवाकोटीको शब्द तथा संगीत रहेको गीत मार्मिक लामाले गाएका... मंगलबार, भदौ २९, २०७८